कस्तो शासन हो यो ? -
अन्तर्वाता / विचार 01/24/2020
०००यहाँ उल्लिखित प्रतिनिधि परिदृश्यले आफ्नो टिप्पणी आफैं गर्छन् । अतिरिक्त टिप्पणीको आवश्यकता छैन । तथापि यस परिदृश्यका चल्ते गम्भीर प्रकृतिका पद्धतिगत प्रश्न अवश्य उठ्छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको यो देशमा कस्तो शासन छ ? यहाँ कानुनद्वारा (रुल बाइ ल) शासन छ कि कानुन अर्थात् विधिको शासन (रुल अफ ल) छ ? अथवा कानुन केवल देखावटी हो, सबै काम–कुरा तजविजी चल्छ । आफू अनुकूल चल्छ ? के शासनसत्ता अथवा कुनै ओहदा प्राप्त भएपछि जे गरे पनि हुन्छ ?
अरुणकुमार सुवेदी अहिलेका स्थापित शक्ति राष्ट्र अमेरिका र उदाउदों शक्ति राष्ट्र चीनबीच विवाद चर्कँदै गएको छ । सतहमा र नेपथ्यमा देखिएका दृश्यावलीहरु जेसुकैभए पनि त्यो विवादको चुरो रणनीतिक र व्यापारिक दुवै हो । रणनीतिक द्वन्द्वको गुह्य भनेको पनि अन्ततः व्यवसायिक द्वन्द्वकै नै हो । संसार त […]
अन्तर्वाता / विचार 09/19/2018
‘जनताको मन जित्नुस्, संविधान संशोधन गर्नुस्’
पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेपछि राजनीतिमा दूर्लभ मानिने परिघटना दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो । गैरराजनीतिक सरकारले गराएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा पहिलो संविधानसभाको भन्दा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फेरियो । तर दुवै संविधानसभामा एउटा कुरा समान थियो, सभाध्यक्ष थिए–सुवासचन्द्र नेम्वाङ । पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदा र ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुँदा पनि सभाध्यक्षको भूमिकामा रहेका नेम्वाङसँग […]